नायिका ऋचा शर्माले आफ्नी आमाको पहिलो वार्षिक पुण्य तिथीमा निकै भावुक स्टेटस लेखेकी छिन् । आमालाई स्मरण गर्दै उनले आमा बिना बाँच्नु पर्दाको भावना पोखेकी छिन् ।
गएको वर्ष पुस १९ गते उनकी आमाको निधन भएको थियो । उनले आमाको मृत्यु आफ्नो लागि पीडादायी भएको उल्लेख गरेकी छन् । उनले आमा बितेपछि आफ्नो संसार भताभुंग भएको बताएकी छन् ।
आइतबार आफ्नो फेसबुक स्टेटसमा ऋचाले लेखेकी छिन्, ‘आमा बित्दा मेरो सानो संसार एकाएक भताभुंग भयो । त्यो बज्रले मुटुको एउटा कुना भत्कियो । मलाई राम्ररी थाहा छ – त्यो कुनो म बाँचुन्चेज कहिल्यै भरिनेछैन अब ।’
उनले आमालाई घर भनेकी छिन् । त्यो, घर जसले हामीलाई एकपटक जन्म र जीवनभर ओत दिन्छ । उनी लेख्छिन्, ‘जीवन दिनेहरु ईश्वर हुन् । मेरी ईश्वर मबाट टाढा गएको आज एक वर्ष भयो । उहाँ गएपछि मेरो जीवनले ओत गुमायो । अर्थ गुमायो । मैले मेरी शीरमाथिको ब्रह्माण्ड गुमाएँ ।’
आमा बीनाको जीवनलाई उनी परिभाषा गर्दै लेख्छिन्, ‘उहाँबिनाका यी ३६५ दिन मेरो जीवनको एउटा रित्तो पाना हो, जसमा अक्षर र वाक्य छन् तर अर्थ र आत्मा छैन ।’ अन्त्यमा उनले आफू विगत एक वर्षदेखि आमाको मायाको भोको भएको बताएकी छिन् । उनी लेख्छिन्, ‘आमा ! सन्तानहरु मायाका भोका हुन्छन् । म एक वर्षदेखि भोको छु र यो भोक जीवनभरी मेटिनेछैन ।’
त्यस्तै, अभिनेत्री ऋचा शर्माले अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर नयाँ चलचित्र निर्माणको घोषणा गरेकी छन् । हाल कमेडी च्याम्पियनको दोस्रो सिजनमा व्यस्त यी अभिनेत्रीले ‘कौसीद’ नामक चलचित्र निर्माण गर्ने भएकी हुन् । शुक्रवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा फिल्मको एक थिम पोस्टर सार्वजनिक गर्दै उनले फिल्म बनाउन लागेको जानकारी दिएकी हुन् ।
पोस्टर हेर्दा फिल्मले बैंकबाट ऋण लिने मानिसको कथा वाचन गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । कुमार भाष्करले निर्देशन गर्ने फिल्मलाई केदार भुषालले निर्माण गर्नेछन् । ऋचा प्रस्तुतकर्ता रहेको फिल्ममा डिमेस श्रेष्ठ कार्यकारी निर्माता र लक्ष्मण बानियाँ सह-निर्माताको रुपमा रहेका छन् । नवविजय प्रकाश श्रेष्ठ र धिरजन थपलियाको कथा रहेको फिल्ममा ऋचा र भोलाराज सापकोटा मुख्य भूमिकामा रहनेछन् । भोलाराजले बलिउड फिल्म ‘बर्फी’ मा समेत काम गरिसकेका छन् ।
‘आधा लभ, भिर्सा गर्ल र सुनकेसरी’ फिल्मको निर्माण गरिसकेकी ऋचाले नयाँ जोश र उत्साहका साथ ‘कौसीद’ बनाउने बताएकी छन् । उनले फिल्मको छायांकन सुरु हुने मिति भने घोषणा गरेकी छैनन् । निशल पौडेलले खिच्ने फिल्मलाई मित्र डि. गुरुङले सम्पादन गर्नेछन् । निरन्जन श्रेष्ठ, रुपेश दाहाल, निर्भिक भट्टराई, सदिक्क्षा गौतमलगायतको पनि फिल्ममा अभिनय रहनेछ ।